နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ကန္တာရထဲက ပန်းပွင့်လေး
သဲကန္တာရ ထဲက ပန်းဖြူကလေးကလည်း ဗေဒါပြန်အံကိုခဲဆိုသလိုပေါ့ ...... အင်္ဂလိပ်စကားမှာတောင် she ရှိသေးတာပဲ မြန်မာစကားမှာ သူမ မရှိဘူးဆိုတာ တစ်မျိုးပဲ ....အင်း မြန်မာညံ့တဲ့သူဆိုတော့ သိတော့ပါဘူးး)
ကန္တာရထဲက ပန်းကလေးရဲ့အလှကို လာရောဖတ်ရှုခံစားသွားပါတယ်..
အတွေးနှင့်အရေးဟာ ရဲရင့်လိုက်တာ၊ သူမဆိုတာကို ကိုရေးတဲ့လူများရင် လက်ခံရမှာပဲ၊
ကန္တာရထဲမှာကို ပွင့်လာခဲ့တဲ့ ပန်းလေးရဲ့ အစွမ်းဟာ နည်းတဲ့ အစွမ်းမဟုတ်ဖူးလေ..။ သူ့ရဲ့သတ္တိနဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်ထားကောင်းလေးကို ခံစားမိတယ်..။
သူမ ဆိုတဲ့စကား ဗမာစကားမှာ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ she ကိုတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မွေးစားတဲ့စကားမို့ ကြိုက်ရင်သုံးပါ၊
အမေက " ညီမလေးကို ခေါ်လိုက်"လို့ပြောရင်..
သူအပြင်သွားတယ် လို့ဖြေသလား သူမအပြင်သွားတယ် ဖြေသလား...လိုတိုရှင်းခေတ်မှာ
သူငယ်ချင်းရေ.........ပိုစ့်လေးက ဖတ်လို့ကောင်းသလို စိတ်မကောင်းစရာလေးနော်။ ဘာသာပြန်တဲ့သူက တော်လို့ ရသကို အပြည့်ခံစားလိုက်ရတယ်။ "သူမ" မရှိပေမယ့် ရေးရတာနဲ့ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေတော့လည်း သုံးလိုက်ပေ့ါ သူငယ်ချင်းရယ်..။း)
နေ့စဉ်သုံး စကားထဲမှာ သူမ လို့ပြောဆို သုံးဆွဲကြတာ မကြားမိလောက် အောင်ရှားတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီပို့လေးမှာ သုံးထားတာ သဘာဝကျပါတယ်...
ပတ်ဝန်းကျင် လောကကြီးကို ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ကြိုးစားနေတဲ့ သူတွေ အခန့်မသင့်လို့ ကျဆုံးမလိုဖြစ်ခဲ့ရင်၊ ကျဆုံးခဲ့ရင် အောင်မြင်သည်အထိ ကူညီမယ့်သူ ဒါမဟုတ် ပို့စ်ထဲကလို တန်ခိုးကြီးတဲ့ နတ်တစ်ပါး ပေါ်လာပြီး အမစရင် ကောင်းမှာပဲလို့ စိတ်ကူးယဉ်မိသွားတယ် ...။
ပန်းကလေးရဲ အစွမ်းကို ရသပေါ်အောင်ရေးလိုက်တောသူရဲစိတ်ထားလေးကို သဘောကျမိတယ်
ဂွတ်ပို့စ်. . .
ကိုကြီးကျောက် ပြောတာကိုလည်း မှတ်သားသွားပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာတော့ သက်မဲ့တွေကို he လို့ သုံးတာ အရမ်းရှားတယ်။ နှစ်ခုတော့ မှတ်မှတ်ရရသိတယ်။ ရောဂါ နဲ့ မုန်တိုင်း (သဘာဝဘေးဆိုး) တွေမှာတဲ့။ ကျန်တာတွေတော့ ဗဟုသုတနည်းလို့ မသိပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ဆရာတစ်ယောက်က ပြောပြတာ ကြားမိလို့. . .:)
သဲကန္တာရမှာ ပွင့်တဲ့ ပန်းကလေး.. မိုက်စ်တယ်.....